C/raxmaan C/shakuur "Turkiga waa inuu dib u eegaa taageerada Ciidamada Haramcad iyo Gorgor oo qeyb ka noqday..." - Jowhar Somali news Leader
Home News C/raxmaan C/shakuur “Turkiga waa inuu dib u eegaa taageerada Ciidamada Haramcad iyo...
C/raxmaan C/shakuur “Turkiga waa inuu dib u eegaa taageerada Ciidamada Haramcad iyo Gorgor oo qeyb ka noqday…”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ugu baaqay dowladda Turkiga inay ka fiirsato taageerada Ciidamada loo yaqaano Haramcad iyo Gorgor oo ah Ciidamo ay tababarto oo ay dhaqaale ku bixiso.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in Ciidamadan loo isticmaalay arrimo siyaasadeed oo sababay khilaaf gudaha, kana qeyb qaateen dagaalo ka dhacay Dhuusamareeb, Baydhabo iyo Gobolka Gedo.
“Haramcad iyo Guutooyinka Gorgor waxaa tababaray oo maalgaliyey Dowlada Turkiga. Waxaa loo isticmaalay faa’iido siyaasadeed oo sababay khilaaf gudaha ah. Waxay qayb ka ahaayeen dagaalladii Dhuusamareeb, Baydhabo iyo Gedo”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
C/raxmaan C/shakuur oo sii hadlayay ayaa yiri “Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Turkiga inay dib u eegaan taageeradooda ciidamadan”.
Ciidamada loo yaqaano Haramcad iyo Gorgor oo uu Turkiga tababaray ayaa dhowaan dowladda Soomaaliya u daabushay Gobolada Galgaduud iyo Gedo, waxaana ka dhashay su’aalo kala duwan in ciidamadaas loo adeegsaday arrimo siyaasadeed, halkii ay aheyd in loo adeegsado dagaalka Al-Shabaab.
Baraha bulshada ayaa si weyn looga hadal hayay magacyada ciidamadan, gaar ahaan Ciidanka Haramcad loo yaqaano oo Afka Carabiga lagu dhaho Fahad, oo ah ninka xukuma Sirdoonka Soomaaliya, waxaana dadku ay durba si layaab ah ugu magac dareen “Ciidanka Fahad”